Overmold ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Overmold Factory
Two Shot Injection မှိုအတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ Overmould
Overmolding သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါ ၀ င်သည့်အတွက်ထုတ်ကုန်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်တစ် ဦး ချင်းပုံသွင်းသောအပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အအေးခံပြီးနောက်၎င်းတို့ကို overmolding tool တစ်ခုဖြင့်သွန်းလုပ်ပြီး termoplastic သို့မဟုတ်ရာဘာဖြင့်သုတ်လိမ်းသည်။
Overmolding သည်ပလတ်စတစ်သို့မဟုတ် elastomer ပစ္စည်းများနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက် ပို၍ ပေါင်းစပ်။ တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖန်တီးသည့်ထူးခြားသည့်ဆေးထိုးခြင်းပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ် overmolding လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, ခြေရင်းအလွှာအစိတ်အပိုင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးပုံသွင်း, ပြီးတော့အပိုဆောင်းပလပ်စတစ်အလွှာမူရင်းအစိတ်အပိုင်းကိုကျော်နှင့်ပတ်ပတ်လည်ပုံသွင်းနေကြသည်။
အလွန်အကျွံ VS. သင်၏ပုံသဏ္Projectာန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမှိုထည့်သွင်းခြင်း။
overmolding ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထည့်သွင်းမှိုကိုရွေးချယ်ပါအခါ:
၁။ အပိုင်းများကို thermoplastics နှင့်ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် 1. Prefabricated အလွှာကိုသုံးပါ။
၂။ ဒီဇိုင်းတွင်အလွှာပေါင်းများစွာ၊ ပစ္စည်းများ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကန့်သတ်ချက်များ) နှင့် / သို့မဟုတ်အရောင်များပါဝင်သည်။ 2. သင်၏အလွှာကိုသတ္တု၊ ဝါယာကြိုးများသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အလွှာနှင့်အလယ်တန်းအလွှာနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်မည် 3. သင်ပြီးပြီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအစိုင်အခဲအပိုင်းအစဖြစ်ချင်တယ်။
Overmolding ၏ကောင်းကျိုးများ -
• fitment နှင့် / သို့မဟုတ် function အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများ
•ဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္Similarာန်နှင့်ဆင်တူသည် overmolding တွင်ကြိုတင်ငွေအလွန်အကျွံကုန်ကျမှုရှိသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ယနေ့သင်၏နောက်ဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကိုစတင်ရန် yuanfang.com တွင် 3D CAD မော်ဒယ်ကိုရိုးရိုးလေး upload လုပ်ပါ။
မှိုစက်ရုံ, သတ္တုထည့်သွင်းနှင့်အတူဆေးထိုးမှို, ပလပ်စတစ်ထည့်သွင်းမှို, ရှေ့ပြေးပုံစံမှို Makers, မှိုထုတ်လုပ်သူ, စိတ်ကြိုက်မှို,